Ezinye umusa omkhulu emphakathini, kanti abanye siyesaba ukucela mayelana intengo izimpahla esitolo. Abanye bahlaselwa ukuhlazeka ukuze bamukeleke indilinga labangane, kuyilapho abanye bear engabonakali bobukhosi umqhele futhi ubani ukusondela kuye azivumelekile. Siyini isizathu zokuziphatha okunjalo? Kukhona isici siqu esihlanganisa zonke onobuhle ngenhla yokuziphatha kwabantu - kungcono ukuzethemba.
Kuyini ukuzethemba yomuntu?
Sivame ukuzwa into efana "ukuzethemba". Isetshenziselwa hhayi kuphela ngodokotela abaqeqeshiwe, othisha odokotela, mayelana nezici siqu sibezwe ekuxhumaneni kwansuku zonke. Kuyini lokhu? Ukuzethemba libizwa komuntu bezibona zabo ukubaluleka kwabanye, kanye ukuhlolwa yayo kwamaphutha futhi omuhle izimfanelo, imizwa, imizwa, endoda ngokwayo.
Lapho uqala ukuthatha umumo?
Esizikala ayikwazi kwakheka ngaphandle kobukhona kwesinye isakhiwo siqu - ungubani. Senzeka izingane kuze kube cishe ngo-3 ubudala, lapho ingane uyazi yokuzimela yayo kusukela lomdabu luhlukanisa nge phansi ezithile futhi iqala ukuzibonakalisa njengomuntu (isb. Ngokuthi. "Izinkanyezi eziyisikhombisa kokuntengantenga" ukuthi ubudala). Lapho ingane ikhula, igcina unethuba ngesikhathi aphansi ezingeni ukuhlola ngokwabo futhi ukuhlaziya isimo sengqondo sabanye ukuba ngokwabo. Ngalesi ubudala, sikwazi ukukhuluma ekuqaleni ukuzethemba, ngoba kwakheka isikhathi eside futhi Dynamics zokuphila.
Ochwepheshe kukhona izinhlobo eziningana ukuzethemba, okungase wafunda ukusebenzisa amathuluzi ngokwengqondo (isibonelo, inqubo Budassi cwaningo ukuzithiba umqondo noma inqubo Dembo-Rubinstein). Kutihlola nekuhlolana siqukethe ngabanye self-izethulo real futhi enhle.
Kukhona ubudlelwane phakathi kwalezi ezimbili izakhiwo zobuntu ( "Mina-real", "Mina-enhle"). Kuye ikhwalithi yale ubuhlobo okungukuthi esishintshile womuntu ukuzethemba.
Underestimation lomuntu ngokwakhe - kunomahluko omkhulu phakathi imicabango ngingubani, eqinisweni, futhi ngibe, kuhle kanjani. Yokuzingabaza, ekuthuthukiseni kuleli cala, kuza kudabula wonke umsebenzi womuntu.
Ngalokwenetisako ukuzethemba - ubuhlobo evamile phakathi "Mina-real" futhi "Mina-ekahle." Man liziphatha ngokwanele ukuba isimo.
Ayihaba - cishe akukho umehluko phakathi kwawo womabili oshiwo ngenhla izakhiwo yomuntu. Man okungukuthi esithambekele kukho Azibheke uma zazingezinhle, ke okungukuthi kakhulu eduze kwalo.
Indlela Yokwenza Dembo-Rubinstein - cwaningo self-incazelo
Ukuze umuntu kubaluleke kakhulu ukuba ezanele ukuzethemba, ngoba uma kungenjalo kukhona izinkinga zokuxhumana, imisebenzi professional, izixhumanisi ahlobene , nokunye. Kuyinto ngesikhathi esifanele ukubheka ukuzethemba lomuntu oyedwa, ukuze ugweme amaphutha lithathelwe yayo emphakathini.
Indlela Yokwenza Dembo-Rubinstein ukucacisa lokho ukuzethemba e umuntu. Lokhu kwenziwa kusetshenziswa yokuhlola izimpawu othile esikalini. Umuntu kunikezwa indlela ifomu, lapho iziqondiso ezibhaliwe umsebenzi oyinhloko. Ukuze kutholakale izinga ukuzethemba alisetshenziswa inqubo classical Dembo-Rubinstein.
Besonto ukuguqulwa yaleli su isetshenziswa eminyakeni yamuva etikhungweni letahlukahlukene zemfundo futhi emsebenzini. Le nqubo Ushintshe AM besonto iqukethe 7 isikali (njengoba kuqhathaniswa 4 yokuqala). Umbhali ungeze ukulungiswa izikali ezifana "namandla okwenza okuthile ngezandla zabo", "ukubonakala", "ukuqashelwa kontanga" futhi ushintshe yemakhono "injabulo" ukuze "ukuzethemba".
Omunye Ungaqonda ukuthi kubalulekile ukwenza ukuhlolwa, funda imiyalo. Lithi wonke umuntu ithuba ukuhlola amakhono abo, izici, izici nokunye. ukulinganisa kwakhe ungaboniswa isegmenti, komunye umkhawulo nezoqala izikolo aphansi ngakolunye ekupheleni - esiphezulu amaphuzu 10. Kufanele kuqashelwe ngesikalo ngasinye dash "-" yizinga lapho kukhona ukuthuthukiswa kwalesi izinga noma izakhiwo manje. Khona-ke, kufanele kuqashelwe kulezi izikali ukuwela "x" iyona ezingeni lapho umuntu test ungase uzizwe ukwaneliseka noma ngenxa yokuqhosha.
Indlela Dembo Rubinstein-ukuguqulwa kuhlanganisa kulesi silinganiso esilandelayo:
ikhono kanye ingqondo yomuntu;
uma uphila udumo ontanga yabo;
ikhono ukwenza okuthile bebodwa, ngezandla zabo;
Le nqubo efanelekayo ucwaningo ngabanye kanye engaphelele. Lapho usebenza neqembu ukuhlola bonke njengoba wagcwalisa lokuqala ukuqeqeshwa esikalini - "impilo". amasu ukuguqulwa Dembo-Rubinstein kuhilela bachitha isikhathi sokwenza umsebenzi yokuhlola kusukela imizuzu 10 kuya ku-12.
Lapho ekucubunguleni nekuhlatiya imiphumela esikalini lokuqala njengenkulumo, ngoba akusona isici siqu. Ubude ngamunye esikalini kumele ngokuqinile elilingana 100 mm, kuyilapho umuntu ngamunye wawubona ngumuntu esiphambanweni ibha uzoba ambalwa isici (isib 48 mm - 48 amaphuzu).
Indlela Yokwenza Dembo-Rubinstein akwembuli nje ezingeni ukuzethemba, kodwa futhi ezingeni siqu izimangalo. Kulolu hlu is latholakala ngokulinganisa inani amaphuzu kusukela "0" ku- "x". Ngakho, izinga ukuzethemba ngezinga elingelikhulu ethile kungenziwa esilinganisiwe esivela "0" ku- "-".
Okulandelayo, isidingo Balisisa ibanga ukusuka "x" ukuze "-". Uma kukhona isimo lapho lizinga izimangalo esingaphansi siqu ukuzethemba izikolo eshiwo njengoba inombolo engenhle. Khona-ke amagoli kwenzeka nokuzinqumela. Indlela Yokwenza Dembo-Rubinstein lula ukucubungula, ngakho-ke livame ukusetshenziswa. Kodwa ochwepheshe cishe njalo ukuyisebenzisa ukuguqulwa Prikhozhan.
Ukuze kutholakale izinga ezimbili cwaningo ubuntu izici wabala amaphuzu Imininingwane izikali zonke imingcele efanele (ngaphandle wokuqala). Indlela Yokwenza Dembo-Rubinstein ngokunembe ngangokunokwenzeka kusiza umuntu aqonde ukuthi ihlola indlela.
Lokwenetisako - 75-89 amaphuzu. Man elivunyelwa ukuhlola amakhono abo.
High - 90-100 amaphuzu. Isimo Okungeke maqondana namakhono azo, yokuntula ukuzithiba ukugxekwa.
Okuphansi - ngezansi amaphuzu 60. Phansi ezingeni zokubuyiselwa umhlaba. Umuntu akakwazi ukuthuthukisa evamile. Akanalo nezifiso ukufeza okuthile, ngoba ekholelwa ukuthi siyindlela wokulahlekelwa.
Lokwenetisako - 45-74 amaphuzu. A ukulinganisa ongokoqobo ngokulinganiselwa uqobo wabonisa kule nqubo, kanye neminye imingcele.
Ulele - 75-100 amaphuzu. Kukhona ezinye izinkinga kumiswa izimfanelo siqu. Mhlawumbe umuntu omdala noma ingane ayikwazi ukuhlola umsebenzi wakhe (imiphumela), ukukhulumisana. Kukhona into okuthiwa "ivalelwe isipiliyoni", okusho umuntu ongenandaba amazwana, iseluleko kanye nezilinganiso abantu.
Understated - okungenani 45 amaphuzu. Ebelibangise enkulu inkinga kumiswa siqu enhlalakahleni, ke imibukiso inqubo Dembo-Rubinstein. Ukuzethemba liphansi kakhulu kungase kube nomphumela ezimbili zokubonisa izinkinga ezingokwengqondo: ngempela ungabazane ohlelweni amakhono abo siqu futhi "zokuzivikela" yokungaqiniseki. Lo mkhuba wesibili ebonwe kunjalo, uma umuntu ngokwakhe ziwumthwalo ukuzivuselela ngale "undervaluation" ukuze kube nzima izinqumo futhi ugweme umthwalo.
Ufuna ibe emehlweni lomunye umuntu imizuzu 10, ushintsha umqondo wakho
Dearg: nezimfanelo ezakhayo, temperamert
Kuyini emaphashini Kaposi sika? Ngingaba ayibulale?